Updated News in Nepali from all over the world at : http://nepali.reaknlinks.com. ‘डाक्टरलाई दुःख छ, पाँच ठाउँ कुदेर बाँच्नुपरेको छ’
‘डाक्टरलाई दुःख छ, पाँच ठाउँ कुदेर बाँच्नुपरेको छ’
‘डाक्टरलाई दुःख छ, पाँच ठाउँ कुदेर बाँच्नुपरेको छ’ ‘तलबले खान पुगेन, एसएलसी सरह व्यवहार भयो’
भनिन्छ, डाक्टरी सम्मानित एवं राम्रो कमाइ हुने उच्च घरानियाँहरुको पेशा हो । शायद यही भएर मध्यम वर्गका मानिससमेत घरबारी बन्धक राखेर आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टरी पढाउन मरिहत्ते गर्छन् ।
तर, नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीका कुरा सुन्ने हो भने दुःखका साथ पढेका नेपालका डाक्टरहरुको हालत फुटपाथमा काम गर्ने मानिसको भन्दा पीडादायी छ । अस्पतालमा थाप्ने तलबले खान नपुगेकै कारण डाक्टरहरुले परिवारसँग समय बिताउन नपाएको र विभिन्न ठाउँमा दौडिएर काम गर्नुपरिरहेको कार्कीको दुःखेसो छ । ‘जतिसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि उत्साहित बनाउने भनेको गाँस, बास र कपास हो’ डा. कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीलाई पनि पाँच बजे अस्पतालबाट घर गएर परिवारसँगै बस्न मन हुन्छ । तर, सरकारी तलबले नपुगेपछि ५ ठाउँ कुदेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
नेपाल चिकित्सक संघले अहिले सरकारले तोकेको तलवमानमा असन्तुष्टि जनाउँदै तलब बढाउन सरकारसित माग गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै महासचिव डा. कार्कीले भने, ‘डाक्टरलाई एसएलसी पास गरेको शिक्षकसरह मूल्यांकन गरिएको छ । उनीहरुको र हाम्रो तलब उस्तै छ । हाम्रो तलब अहिले पनि साढे ३४ हजार रुपैयाँ हो । त्यसैले यो तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेका हौं ।’
सरकारी कर्मचारीको नयाँ तलबमान सार्वजनिक भएपछि नेपाल चिकित्सक संघले विरोध गर्‍यो । एसएलसी पास गरेका शिक्षक र एमबीबीएस डाक्टरको तलब समान भन्ने तर्क पनि सुनियो । तपाईँहरुको असन्तुष्टि के हो ?
नेपालका चिकित्सकहरु पहिले सातौं तहबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने नियम थियो । हामीले ९ औं तहबाट सेवा प्रवेश हुनुपर्छ भनेर लामो संघर्ष गर्‍यौं र करिव एक दशकअघिबाट डाक्टरहरु आठौं तहबाट सेवा प्रवेश गर्ने नियम बन्यो । तर, एमबीबीएस गरेको चिकित्सक ९ औं तहबाट सेवा प्रवेश हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग यथावत छ ।
नेपालका ठूला 'पावर ब्रोकर' चन्द्र ढकालले तिरे २० लाख जरिवाना
दोस्रो, हाम्रो तलब समय सापेक्ष छैन । डाक्टर बन्नका लागि आईएसस्सी पढेर एमबीबीएस गर्नुपर्छ । त्यसपछि इन्टर्नसिप हुन्छ । यति धेरै लगानी गरेर पढेर आएको डाक्टरलाई एसएलसी पास गरेको शिक्षकहरु सरह मूल्यांकन गरिएको छ । उनीहरु र हाम्रो तलब उस्तै छ । हाम्रो तलब अहिले पनि साढे ३४ हजार रुपैयाँ हो । तलब कम भएकै कारण डाक्टरहरु ५ ठाउँ कुदेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यो तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेका हौं ।